Halkee mareysaa Sheekada Coutinho iyo Barcelona??? – Gool FM
Halkee mareysaa Sheekada Coutinho iyo Barcelona???
Byare August 30, 2017
(Europe) 30 Agoosto 2017. Sheekada Coutinho iyo Barcelona ayaa weli meel u dhicin xilli uu suuqa ka harsan yahay uun maanta iyo berito.
Laakiin warar dhawaan gal ah ayaa tibaaxaya in Barcelona ay weli cadaadis xoogan saareyso sidii ay ula soo saxiixan lahayd Coutinho iyadoona laacibka reer Brazil uu kol horeba ogaaday in loo ogolaan doono inuu u dhaqaaqo kooxda reer Catalonia ka hor inta uusan xirmin suuqa sida ay sheeganeyso Yahoo.
Milkiilayaasha kooxda lagu naaneyso Reds ayaa u sheegay Coutinho inay aqbali doonaan codsigiisa ah inuu ka tagayo kooxda, Yahoo ayaa sidoo kale sheegeysa in Barcelona ay bixin doonto lacago dhan 160 milyan oo euro taa oo ka dhigeysa laacibka ugu qaalisan taariikhda kooxda wuxuuna ka sara mari doonaa xiddiga dhawaan galka ah ee Dembele.
Liverpool ayaa dabacsanaan la timid saacadihii dambe waxaana jirta rabitaan ah inay wada hadalo la furto Barca.
MUUQAAL+SAWIRRO: Monaco oo dhabarka ka jabisay Juve iyo Milan
Coutinho iyo Neymar waxa ay ku riyoon jireen ku biiridda Real Madrid